Ndị na - echekwa ọnụ ọchị na - egbuke egbuke - Atụmatụ Echiche Tattoos
1. Njiji ncha akara egbuke egbuke ihe omimi maka umu nwanyi n'olu
N'ebe nile n 'uwa, usoro nke tattoos ejirila ihe ndi ozo bu ndi amamihe na umunwanyi. Ụkpụrụ a karịrị ndị a ma ama na anyị nwere ike ịkọtara mmadụ ole na ole na-enweghị àgwà nke ihe ụfọdụ ma ọ bụ nke ọzọ.
2. Ifuru na nru ububa echiche echiche igbu egbugbu maka ụmụ agbọghọ na azụ
Na mbu, anyị hụrụ ndị ikom na-achịkwa ọrụ aghụghọ, ma agbanyeghi ka anyị na-ahụ ọtụtụ ụmụ nwanyị na-aghọta nkà. Ị hụla nsị ntanba na oge na nso nso a?
3. mara mma okooko osisi na ndị na-egbu egbu egbugbu maka ụmụ nwanyị na azụ
Aka nwere ike iji aka na-egbuke egbuke nke nwere ike ịchọrọ gị ụdị ihe dị iche iche.
4. Njiji ncha echiche akara mkpịsị aka maka ụmụ agbọghọ na ọkara aka
Debekwuo ya mgbe ị nwere egburede nru ububa nke e dere na akwara gị. Ozi bụ mgbe nile mgbe ọ bụla ị na-ewere gander na ya.
5. Nnukwu nri butterflies ink na-egbu egbu na ụmụ nwanyị ọkara aka
Ntuba nru ububa ejiri mejuputa n'ime ihe omumu nke mmadu. Echeghị echiche na ndepụta ndị a na-egbu egbu aghọwo ihe a ma ama. Nke a apụtaghị na ndị ikom ahụ na-ahapụ naanị ha maka ịhụnanya maka nru ububa.
6. Ugboro abụọ na-eche echiche igbu egbugbu maka ụmụ nwanyị
Ị nwere ike were egbugbere ọnụ nru ububa gị na ọkwa dị elu mgbe ị na-eme ka o sie ike ma nwee obi ụtọ n'apata ụkwụ gị.
7. Akwukwo akwukwo na ububa ink na-egbu egbu maka ụmụ agbọghọ
Akwukwo ntughari nke ndi mmadu na-eche banyere okooko osisi. Anyi nwere uda ntughari di iche iche nke na-achota anyi otutu ihe. Maka ndị enyi, anyị na-atụle nruba uhie uhie; ezighi ezi bụ ọcha ma ọ bụ mgbu mgbe egosipụtare ịhụnanya site na nru uhie uhie.
8. Njikere nfe dị mfe nchikota onyonyo maka umu nwanyi n'azụ
Taa, ndị na-eme ihe nkiri ejiriwo ụzọ dị mma mee ka nru ububa dị mma ma nwee obi ike na akpụkpọ ahụ.
9. Cool leg butterfly tattoo echiche na ozi, m nwere ike ofufe
Ntuba na egbuke egbuke enwetawo ihe kachasị mma n'etiti ndị na-egbu egbu. Ihe mgbochi nke urukurubụba dị ebube, nke bụ ihe mere anyị ji ahụ ya mgbe niile.
10. Egbugbu egbuke egbuke echiche maka umu nwanyi
Mee ka egbu egbu na-egbu egbu na ụkwụ gị. Ị na-ahọrọ otú ị chọrọ egbu iji lee ụkwụ gị.
11. Ụdị ntule egbugbere ọnụ maka ụmụ nwanyị na ọkara aka
Nweta ngwa ngwa na ihe omume na ị bụ onye òtù ọlụlụ nke ihe e kere eke ma gbanwee anụ ụlọ gị na-egbu egbu egbu egbu. O doro anya na ị ga-ahụ ụzọ na ọ ga-ahụ akpụkpọ ahụ gị.
12. Ufiri okooko osisi na butterflies akara onk na azụ maka nwanyi
ụmụnne mgbukoi ika tattooaka mma akana-egbu egbuUche obiima ima mmarip tattoosaka akaAnkle Tattoosegbu egbuechiche egbugbuokpueze okpuezeọdụm ọdụmegbu egbu egbuegbu egbu mmiriegbu egbu diamondmehndi imeweNtuba ntugharinnụnụn'olu oluakara ntụpọọnwa tattoosaka akaenyí egbu egbuGeometric Tattoosegbu egbu osisi lotusụkwụ akaakwara obiegwu egwuỤdị ekpomkpaEgwu ugoarịlịka arịlịkaazụ azụna-adọ aka mmandị mmụọ oziagbụrụ ebomma tattoosndị na-egbuke egbukeenyi kacha mma enyidi na nwunyeakpị akpịegbu egbu hennaudara okooko osisingwusi pusiegbugbu maka ụmụ agbọghọzodiac akara akaraegbu egbu okpuegbugbu egbugbuegbu egbu maka ụmụ nwokeegbu egbu ebighi ebi